U8836D,T8830 Pro,T8950D ကို Root လုပ်နည်း….. : Myanmar Mobile Software Developer
U8836D,T8830 Pro,T8950D ကို Root လုပ်နည်း…..
January 5, 2013 | 23 Replies
ဒါပေမဲ့ပြန်ပြီး Update လုပ်ပေးလိုက်ပါတယ်…..
Huawei U8836D,T8830Pro နဲ့ T8950D တို့ ကို root လုပ်ဖို့အတွက် Root Restore Binary 15 လိုပါတယ်….
Root with restore by Binary 15 Password:www.myanmarmobilesoftwaredeveloper.com
download လုပ်ခဲ့တဲ့ Root_with_Restore_by_Binary 15 ကို zipဖြည်လိုက်ပါ။
ဖုန်းကို ကွန်ပျူတာနဲ့ချိတ်ဆက်ပါ။ ပြီးရင် Runme.bat ဖိုင်လေးကို run ပါ။
နံပါတ် ၃ ကိုနှိပ်ပြီး Enter တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါ။
Auto Reboot ကျမယ်….
မတက်လာရင် Power ကိုနှိပ်ပြီးဖွင့်ပေးလိုက်ပါ…
Super User ရတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်….
kotintlwin says: October 15, 2012 at 8:48 pm အစ်ကိုရေ CWM သွင်းတာလေးပါပြောပြပါနော်
Reply zaw moe says: October 19, 2012 at 9:54 pm Huawei u8836d Driver ရှာမရဘူးဗျ။ကူညီပါဦး။
Reply ဖြိုးချမ်း says: October 20, 2012 at 7:15 am Driver ပါတင်ပေးလိုက်ပါတယ်…..
Reply aungaung says: November 1, 2012 at 7:50 am thanks bro
Reply Dastan says: December 23, 2012 at 6:11 pm thz U par
Reply yanchan says: January 5, 2013 at 3:59 pm Blaze driver လိုချင်လို့ပါ
Reply kyaw zin says: January 5, 2013 at 11:06 pm huawei T8830pro ကို root လုပ်လို့မရပါဘူး
အစ်ကိုပေးထားတဲ့နည်းက T8830pro android 4.0.4 build number V100R001CHNC01B108 ကိုရပါတယ်
ဒါပေမယ့် T8830pro android 4.0.4 build number V100R001CHNC01B109 ကို မရပါဘူး build number မှာ နောက်ဆုံး 8 နဲ့9ပဲ ကွာပါတယ် တခြား ဆိုဒ်တွေမှာ ရှာကြည့်တော့လဲ ဘယ်မှာမှ မတွေ့ဘူးဖြစ်နေတယ် ကျေးဇူးပြုပြီး ကူညီပါဦး ဒါမှ မဟုတ်လဲ မြန်မာဖောင့်ကို root မလုပ်ပဲ ရမယ်ဆိုရင်လဲ ပြောပြပါဦးဗျာ
Reply ဖြိုးချမ်း(Admin At MMSD) says: January 6, 2013 at 9:17 am T8830Pro b109 အတွက်သက်သက်တင်ပေးပါ့မယ်…
Reply kyawkyawlatt says: January 11, 2013 at 7:48 pm T8830Proကိုfirmwareတင်တာမရဘူးဖြစ်နေတယ်ကူညီပါဦး
Reply tunhlaingaung says: January 18, 2013 at 3:45 pm အကိုရေ
bin4ny-v15 zip file ဖြည်လို့မရဘူး
Reply ics says: February 5, 2013 at 3:10 am bin4ny-v15 zip file ဖြည်လို့မရဘူး
password ပြောပြပါအုံး bro
Reply tunhlaingaung says: January 18, 2013 at 3:48 pm ရသွားပြီ အစ်ကို
Reply tunhlaingaung says: January 18, 2013 at 3:59 pm အစ်ကိုရေ
u8825D ကိုကုတ်မတောင်းဘဲ Auto root တဲ့ software ရနိုင်လား
Reply thuyein says: January 28, 2013 at 1:32 pm အကိုရေကျွန်တော် t8830 pro ko root လုပ်တာမ၇ဘူးဖြစ်နေတယ် build 108 ချိန်းပြီးပီ restroe ပေါ့တော့restroe ကျ လိုက်တယ် ပိတ်သွားပြီပြန်တက်လာတယ် superuser မပေါဘူးဖြစ်နေလို့ကူညီပါနော်အကိုဖုန်းနံပါတ်ရှိပေးပါလားအကိုရယ်ကျွန်တော်လုပ်တာဘယ်နားမှားနေလဲဆိုတာသိချင်လို့ပါအကို ရယ်ကူညီပါနော်…..
Reply Aung Than Oo says: January 30, 2013 at 4:11 am huawei T8830pro ကို root လုပ်လို့မရပါဘူး
Reply ဖြိုးချမ်း(Admin At MMSD) says: January 30, 2013 at 4:37 am အခုရေးပြီးတင်ပေးပါ့မယ်.
Reply Aung Than Oo says: January 30, 2013 at 4:13 am အားရင် ကူညီပါအုန်းနော်
Reply skymelody says: February 1, 2013 at 9:49 am အစ်ကိုပေးထားတဲ့ link ( root with restore by binary 15 )ကို မဒေါင်းတတ်ဘူးဖြစ်နေတယ် …ကူညီပါအုံး။
Reply [email protected] says: February 5, 2013 at 6:56 am Root with restore by Binary 15
Reply nyan linn htet says: March 24, 2013 at 6:32 pm အကိုရေ zip file ဖြည်လို့မရဘူး
Reply zaw zaw says: April 5, 2013 at 2:08 pm အကိုရေ t8830 pro အဆင်ပြေဆုံး root လေး လုပ်ပေးပါအုံးခင်ဗျ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
Reply auroralay89 says: June 3, 2013 at 3:24 pm သု စွန်တွေချည်းပဲ
Reply ko htway says: July 2, 2013 at 11:24 pm အကိုရေ T8830pro B108 ရဲ့ CWM လေးလိုချင်လို့
လက်ရှိ Rom ကို backup လုပ်ချင်လို့
တင်ပုံတင်နည်းလေးပါ အဆင်ပြေရင် ရေးပေးပါအုံးနော်